कसले हान्दै छ बम ? – MEDIA DARPAN
कसले हान्दै छ बम ?
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित १४ मंसिर २०७४, बिहीबार ०२:०३
काठमाडौं, १४ मङ्सिर- गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपस्थित कांग्रेसको चुनावी सभालाई लक्ष्य गर्दै गत मंगलबार दाङमा गराइएको बम विस्फोटमा परी घाइते भएका म्यादी प्रहरी विनोद चौधरीको बुधबार बिहान उपचारक्रममा मृत्यु भयो । देउवाले सम्बोधन गर्दैगर्दा नजिकै भएको विस्फोटमा चौधरीसहित नौ प्रहरी घाइते भएका थिए, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरअन्तर्गत कार्यरत चौधरीको उपचारक्रममा नेपालगन्जस्थित कोहलपुर मेडिकल कलेजमा निधन भएको हो । चुनावी गतिवधि सुरु भएसँगै तीव्र बनेको विस्फोटमा पहिलोपटक मानवीय क्षति भएपछि आमजनताले बम विस्फोट गराउनेको खोजी गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । ‘के उद्देश्यले र कसले गराएको थियो विस्फोट ? मुलुकभर कसले र किन बम पड्काइरहेको छ ? ‘ आमजनता यसको जवाफ खोजिरहेका छन् ।
तुलसीपुर बम विष्फोटमा घाइते म्यादी प्रहरीको मृत्यु
जेलबाटै भोट प्रभावित
६ वैशाख, काठमाडौं । जापानको मेइहोकु कम्पनीले पोखरा महानगरपालिकालाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम तथा…